IITEMPLATE ZOMEMO ZOMTSHATO ZOMTSHATO ONOKUZIPRINTA - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Izikhokelo zeeMemo zoMtshato ezi-21 onokuzenza uze uziprinte
Izikhokelo zeeMemo zoMtshato ezi-21 onokuzenza uze uziprinte
Ngaba ujonge ukugcina izinto zokubhala? Nazi izinto esizithandayo.
U-Emma wenza umxholo we-e-commerce weKnot.
Kwindima yakhe njengombhali womxholo, ubhala iinkcazo zabathengisi bomtshato beKnot Worldwide.
U-Emma une-Master of Arts kwiNcwadi kunye noPapasho oluvela kwiYunivesithi yeSizwe yaseIreland, eGalway.
Ukuhlaziywa ngoJan 29, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Sifumana: Kukho umtsalane othile kwaye kulula ukusebenzisa iitemplate zesimemo somtshato (iitemplate onokuzikhuphela kwaye uziprinte ngokwakho). Isibini sinezizathu ezininzi zokufuna ukuprinta ezabo izinto zokubhala zomtshato, nokuba kunjalo Gcina imali kuyilo kunye nokuthumela okanye ukunciphisa ixesha lokuvelisa.
Ewe, kukho izinto ezimbalwa ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokushicilela ezakho izimemo. Umzekelo, uya kudinga ukufikelela kwiprinta ekumgangatho ophezulu kunye nonikezelo lwe-inki ephezulu. Ukuba unoluhlu olude lweendwendwe, kusenokufuneka uchithe ixesha elininzi kwiprinta uyondla iphepha. Ukungathethi, ezinye iitemplate zifuna i-DIYing engaphezulu kwezinye. Kukho iitemplate ezibuza iinkcukacha ezimbalwa zobuqu, emva koko kukho iitemplate ezinokuhleleka ngokupheleleyo.
Ukuba ujonge izimemo ezingaphantsi kwezandla kodwa ezingayi kwaphula uhlahlo-lwabiwo mali, jonga Izimemo zoLwazi . Usenako zenzele yonke into ukusuka kwiifonti ukuya kumbala, kodwa uncedo lokuyilwa simahla luyafumaneka nangaliphi na ixesha. Unako kwakhona ukuhambelana ngaphandle komthungo kwizimemo zakho kwiwebhusayithi yakho yomtshato ukuze ube lula ngakumbi. Kwaye awuzukuba naxhala lokuprinta nantoni na ngokwakho.
Ngokuqinisekileyo ukuba izimemo zomtshato eziprintiweyo zihambo elungileyo yakho? Silapha ukunceda. Siqokelele ezinye zeendawo ezilungileyo kwi-intanethi ukufumana iitemplate zesimemo somtshato ezihleliweyo. Kwaye sikhethe uyilo lwethu oluthandayo onokuluthenga kwangoko.
Apho unokufumana khona iitemplate zezimemo zomtshato eziBalaseleyo
Iitemplate zesimemo somtshato onokuziprinta ngoku
Uzibuza ukuba ziphi iitemplate zesimemo somtshato ezihleliweyo kwi-intanethi? Unethamsanqa: I-intanethi igcwele izixhobo ukuba uyazi ukuba ujonge phi. Iitemplate zesimemo somtshato ezinokwenzeka ziyindlela elungileyo yokubeka owakho ubuqu kwiinkcukacha zomtshato wakho. Ezinye iitemplate zikuvumela ukuba uhlengahlengise yonke into, ukusuka ekubekweni ukuya kwifonti kunye nemibala. Landela nje umkhombandlela kwaye uya kuba nesimemo somtshato esenzelwe wena ukuba silungele ukuprintwa. Nazi iindawo ezimbalwa esizithandayo.
Mhlawumbi sele udibene noMinted kuphando lwakho lwesimemo somtshato, kodwa ngaba uyazi ukuba isayithi inika kwakhona izitayela onokuziprinta ekhaya? Zininzi izimemo eziyilelwe ngobungcali ukuze zilungele yonke imixholo kunye nezitayile. Nje ukuba ufumane itemplate yesimemo esifanelekileyo somtshato wosuku lwakho olukhethekileyo, uhlawula umrhumo wexesha elinye onika inkululeko yokuprinta iikopi ezininzi kangangoko ufuna. Kulunge kangakanani oko?
I-Etsy yindawo yobuncwane bezinto ezininzi, kungoko kuyamangalisa ukuba yenye yeendawo ezilungileyo zokufumana itemplate yesimemo somtshato? Uqinisekile ukufumana into kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nesitayile, ukusuka kwiintyatyambo zerustic ukuya kuyilo lwejometri yanamhlanje. Kunye noyilo lwesimemo, uyakufumana ikhadi lesipho kunye nazo zonke izixhobo ozifunayo ukuze uthathe indawo yokubhalela umtshato uye kwinqanaba elilandelayo. Yintoni enye onokuyifuna?
Khuphela uze uprinte
Ukuprinta isimemo esivela kuKhuphelo kunye noPrinta akunakuba lula ngakumbi. Into ekufuneka uyenzile kukufaka iinkcukacha zosuku lwakho olukhethekileyo ukwenza uyilo lube lolwakho ngokupheleleyo. Imibala nayo yonke iyenzeka ngokwezifiso zakho, ukuba ufuna ukulungelelanisa nebali lemibala yomtshato wakho. Umgca ophawulwe ngesandla ubonisa ukuba usisika phi isimemo ukuze silunge ngokufanelekileyo kwimvulophu.
KuLia Griffith, uya kufumana okungaphezulu kakhulu kokumenywa kwezimemo zomtshato. Kukho namakhadi endawo yomtshato, iinombolo zetheyibhile kunye namakhadi enkosi, ukuze uprinte yonke isimemo. Ukuba ufuna ukuhamba imayile eyongezelelweyo, isimemo ngasinye sikhatshwa yimiyalelo eneenkcukacha malunga nendlela yokuhombisa i-DIY ukubopha isimemo kwimihlobiso yosuku lwakho lomtshato, njengephepha leentyatyambo ze-hibiscus ukuxhasa isimemo setropiki.
Enye indlela esekwe kwiwebhu yokuhlela imifanekiso kunye nesoftware yoyilo enjengeFotohop, Canva inezimemo zomtshato zasimahla ezikhoyo. Ujongano olusebenziseka lula lwenza kube lula ukuyila uyilo kukhetho lwakho. Yongeza iifoto, hlengisa ifonti kwaye utshintshe umbala ngombala ngonqakrazo olumbalwa. Eminye imizobo ekhoyo kwisiza inokubiza iidola ezimbalwa ukongeza kwitemplate yakho oyikhethileyo, ke khumbula izinto ozikhethileyo ngaphambi kokuzibophelela kuyilo oluthile.
Wow iindwendwe zakho ngezimemo zomtshato ezenziwe ngokwezifiso ezivela eTemploola. Nganye yeetemplate zabo zesimemo somtshato simahla zinokuhlengahlengiswa ngokupheleleyo, zisenza ukuba kube lula ukwenza ngokwezifiso. Ukuthumela ngaphandle uyilo lwakho kwi IMicrosoft Word ilula nayo, kuba itemplate nganye yesimemo somtshato seTempola ibandakanya ukusika imigca yokushicilela. Gcina imihla kunye namakhadi e-RSVP nawo ayafumaneka ukuze ukhuphele simahla, ukuze ubambisane nezinto zokubhala zomtshato.
Iintyatyambo zeWatercolor, iziketshi zeediliya kunye neprints ezinesibindi zenza ukuba itemplate yesimemo ifumaneke ngeJukebox super ekhethekileyo. Yindlela elula ngokulula yokuseta ithoni yosuku lwakho olukhulu. Ukuba uziva uyile ngokukodwa, nika iitemplate zabo ezingenanto uzame kwaye uyile isimemo sakho kwasekuqaleni.
Amakhadi kunye neepokotho
Ngamanye amaxesha ezona zinto zibalulekileyo ebomini zikhululekile, kwaye amakhadi kunye neepokotho bubungqina. Iitemplate zezimemo zomtshato zasimahla zihonjisiwe, zinemibala kwaye zintsha. Ikwabonisa ukuhonjiswa okufikelelekayo njengamabhendi esisu kunye namatywina e-wax, okwenza ukuba kube lula ukuguqula izinto zakho ezishicilelwayo simahla kwi-luxeakes ukugcina ubuncwane ngonaphakade.
Ngeewebhusayithi ezininzi ukukhangela, ngekhe wazi ukuba ungaqala phi. Siqokelele ezinye zeetemplate zethu zezimemo zomtshato ezithandekayo zokukunceda.
Ukuba ufuna ngokwenene ukwenza isimemo sakho somtshato wesimemo sokukhumbula, ukwenziwa kwesitshixo kubalulekile. Lo mthengisi wenza umfanekiso oqhelekileyo wesibini esonwabileyo ukubandakanya isimemo, sokubhalela izinto zomtshato oya kufuna ukuxabisa ngonaphakade. Baye bakhathalele ukuhlela ke konke okufuneka ukwenze kukuprinta!
Khumbula uNovemba Inc Isimemo somtshato somtshato wesiko, ukusuka kwi- $ 40, Etsy.com
Ixabisa malini idayimani ye-carat esi-8
Uluhlu lweeleyisi oluchazwe kule template yomtshato eprintwayo luthandana ngobuqhetseba. Emva kokuba ungeze iinkcukacha zakho ezizimeleyo kwiprint-it-yourself mema kwi-Minted, i-PDF yesimemo sakho somtshato sithunyelwa nge-imeyile kuwe.
ULaura Condouris weMinted I-Mantilla yaseSpain yoshicilelo-ngokwakho isimemo somtshato, $ 50, IMinted.com
Siyayithanda indlela le template yesimemo eprintwayo edibanisa ngayo iphalethi yanamhlanje ye-monochrome kunye ne-calligraphy yakudala. Nje ukuba uthenge olu luyilo, uya kufumana i-imeyile enekhonkco ukuhlela nokukhuphela indalo yakho egqityiweyo.
Izikhokelo zeZimemo Itemplate yesimemo somtshato ehleliweyo, $ 11, Etsy.com
Ngaba ikhona into efanelekileyo yomtshato kuneentyatyambo? Olu khetho lwe-navy kunye ne-blush lunokubandakanya ikhadi le-RSVP kunye nenqaku lombulelo. Ngexesha lenkqubo yokuthenga uza kuthumela iinkcukacha zomhla kumthengisi kwaye baya kukwenzela konke ukuhlela!
Simply P zokubhala I-navy kunye ne-blush eprintiweyo yokushicilela isimemo somtshato, ukusuka kwi- $ 5, Etsy.com
Itemplate yesimemo inenkangeleko encinci, kodwa iintsiba kunye ne-greenery accents ziyenza ikhetheke ngokwaneleyo kusuku lwakho olukhulu lwe-rustic. Emva kokuba ukhuphele ifayile, ukhululekile ukuba uyihlele nangona ubona kufanelekile.
UWillow Lane Paperie Itemplate yesimemo se-boho esishicilelweyo, i-15, Etsy.com
Iibrashi ezijikeleze umda wale template ibambe amehlo zonyusa umbala oqaqambileyo kwaye zinike i-chic, ukupeyinta ngesandla.
UAnnie Clark woBugcisa Isimemo somtshato esishicilelweyo sikaDarjeeling, $ 50, IMinted.com
Amaxabiso eengubo zomtshato zikaGalia lahav
Iitoni ezityebileyo kule template yeentyatyambo zesimemo somtshato ziya kuba zilungele umtshato wokuwa. Uya kufumana ikhonkco ukuhlela izinto zokubhala kwangoko emva kokuthenga.
Amaphepha eMagnolia kunye neCo Itemplate yesimemo somtshato esishicilelweyo, $ 13, Etsy.com
Okanye mhlawumbi uceba ukubhiyozela ubusika? Imvelaphi eluhlaza okwesibhakabhaka emnyama yale template ayilindelekanga kodwa kukhetho lomxholo. Ifonti ihlelwa ngokupheleleyo, ukuba kukho inkangeleko ethile onokuyikhetha.
Templeola Ithemplate yesimemo somtshato sasebusika sejometri, simahla, Temploola.com
Uthando lweRose Gold
Umkhombandlela wegolide rose awusayi kuhamba nangaliphi na ixesha kungekudala, kwaye olu khetho ludibanisa noshicilelo oluthambileyo lwe-bokeh. Amagama kunye nemibala yefonti yonke inokwenziwa ngokwezifiso!
Inki yestudiyo rose igolide eprintiweyo isimemo somtshato, ukusuka $ 20, Etsy.com
Ukuba ukhetha into engaqhelekanga, uthini ngemibala eqaqambileyo, engabonakaliyo? Imizobo yobugcisa kule template ityhila ngokwenyani ngokuchasene nemvelaphi yokungathathi hlangothi.
URebecca Bowen weMinted I-Art Quill yokuprinta-ngokwakho isimemo somtshato, $ 50, IMinted.com
Ukuba ufuna ukubhiyozela ukwindla ungakhange ungene kuwo onke amathanga, iskimu sombala eorenji esitshisiweyo sale template yomtshato sisebenza ngokuchanekileyo. Uyilo luyakhutshelwa kwangoko, kwaye ungahlela iinkcukacha ezibhaliweyo kumxholo wentliziyo yakho.
Amaphupha amnandi Paperie Co. I-Adley eprintiweyo yokuwa kwesimemo somtshato, $ 23, Etsy.com
Onke Amehlo Kuwe
Ukubandakanya ifoto kwisimemo sakho somtshato yindlela elula yokongeza ukubamba kwakho. Inye evela ukubandakanyeka kwezithombe ingalunga!
Canva Itemplate yesimemo somtshato somfanekiso we-greyscale, simahla, Canva.com
Bold kwaye Buhle
Umzekeliso wepikoko kwesi simemo somtshato esishicilelweyo uyamangalisa, kwaye into ethile iindwendwe zakho ziya kufuna ukuyibeka. Ngaba ufuna ukuyenza ibe yeyakho ngakumbi? Ngelixa uhlela itemplate, unokukhetha ukongeza ifoto.
I-Urbania I-Belle blush isimemo somtshato esishicilelweyo kunye neepikoko, $ 15, Etsy.com
Khetha imibala eqaqambileyo njengothando lwakho kwesi simemo somtshato sihonjiswe ngojongilanga, esilungele umtshato wehlobo. Ungahlela kwaye ukhuphele kuyilo amaxesha amaninzi njengoko ufuna, ukuba kungakho naluphi na utshintsho ngomzuzu wokugqibela.
Imisebenzi yesicakakazi sembeko
Ivenkile yeMinty Paperie Itemplate yesimemo somtshato kajongilanga, $ 16, Etsy.com
Ukuphelelwa lixesha kunye noMhle
Ngaba itemplate yesimemo somtshato ehleliweyo ejongeka ngokungathi uqabe ii-inishiyali zakho emthini? Ewe Nceda! Olu luyilo lumnandi luza ne-RSVP kunye namakhadi enkosi. Umdali wongeza iinkcukacha zakho kuyilo, ke unento enye onokuyinyamekela.
Uyilo lweeNgqondo zeengqondo isimemo somtshato esiprintiweyo, i- $ 16, Etsy.com
Enoba ulungiselela umtshato oya kuyo, okanye uyathanda nje ukuhamba kunye, le template yasimahla yomtshato imile kwitikiti yinto yobuqu. Yonke into ukusuka kwimibala ukuya ekubekeni kuhleleke!
Jukebox itemplate yendiza yesimemo somtshato, simahla, JukeboxPrint.com
Imifanekiso yamadevu kwesi simemo somtshato esishicilelweyo iyonwabisa ngokwenene, kwaye yindlela entle yokubonisa uburharha.
UPenelope Poppy oBunjiweyo I-Stache + I-Stache phrinta-ngokwakho isimemo somtshato, $ 50, IMinted.com
Iimpawu zeLavender zenza esi simemo somtshato esishicilelweyo sigqibelele imibhiyozo ye-rustic. Ngoyilo, ukhululekile ukuhlela ubume kunye nolwazi olifunayo emva kokuba uthengile.
UBlanche Paperie Isimemo somtshato esishicilelweyo se-lavender, $ 13, Etsy.com
Ukuba uyayithanda uyilo lwala maxesha, ke umbala weentyatyambo ezimibalabala yindlela entle yokudibanisa izinto zangoku nezeeklasikhi. Eli suite libandakanya ikhadi leenkcukacha kunye nekhadi le-RSVP. Umthengisi ukhathalela ukongeza lonke ulwazi kuyilo lwakho.
ULuka kunye noLily Paper Co iintyatyambo ezimibalabala isimemo somtshato esishicilelweyo, $ 6, Etsy.com
Umzekelo weholographic yindlela epholileyo yokuphucula izimemo zakho zomtshato. Le template ithile yomtshato icala-mbini, inemvelaphi eneenkcukacha zendlela ye-RSVP. Ukhululekile ukuhlela olu luyilo emva kokuba uluthengile.
I-Ofisi yeZiko Imibala emacala mabini ye-holographic enemibala eprintiweyo yesimemo somtshato, $ 9, Etsy.com
Ukuba ucwangcisa ukuchitha ezinye-okanye zonke-zosuku lwakho olukhulu ngaphandle, uyilo oluhonjiswe nge-apile lukhetho oluhle. Imvelaphi yenzelwe ukuba ijongeke ngokungathi yi-burlap, ye-rustic touch.
IPhepha leBourne Co leMinted I-Apple Harvest yiprinte-ngokwakho isimemo somtshato, $ 50, IMinted.com
yimalini ukutshintsha igama lakho eliphakathi
ukuba nokubamba intsingiselo
ubungakanani bokomisa iwasher
camo amakhonkco kuye kunye naye